कमोडिटी फ्युचर्समा कसरी लगानी गर्ने ? (लगानी गर्दा ध्यानदिनुपर्ने टिप्सहरु सहित) - IAUA
ramkrishna November 24, 2017	commodity market
आरपी पौडेल, बैंकिङ खबर / कुनै ब्राण्ड नाम दिएर प्याकिङ नगरिएका गहुँ, मकै, कफी, सुन, चाँदी, कच्चा तेललगायतका वस्तुहरूलाई कमोडिटी भनिन्छ । तिनको मूल्यमा दिनहुँ मात्र होइन, घण्टैपिच्छे समेत घटबढ भइरहन्छ । यस्तो घटबढ भइरहँदा लगानीकर्तालाई मुनाफा सिर्जना गराउने तथा उत्पादकहरूलाई भविष्यमा हुने मूल्यको घटबढको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थित तवरले एक्सचेञ्जमार्फत कारोबार हुन्छ ।
कमोडिटी फ्युचर्समा लगानी कसरी गर्ने ?
फ्युचर्स कन्ट्राक्टमा लगानी गर्न कमोडिटीज फयुचर्स एक्सचेञ्जको ब्रोकर फर्ममा गएर खाता खोल्नुपर्छ । खाता खोल्दा ब्रोकरले ग्राहकलाई फ्युचर्स कारोबारमा नोक्सानी हुन सक्ने कारोबारबारे आफू जानकार रहेको उद्घोष गरेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाउन सक्छ । यसरी खोलिएको खातामा तोकिएको रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो रकम कमोडिटी, ब्रोकर वा एक्सचेञ्जको नियमअनुसार कम वा धेरै हुन सक्छ । कन्ट्राक्टको बजार मूल्य बढ्यो भने तपाइँको खाताको मूल्य बढ्छ भने कन्ट्राक्टको मूल्य घट्दा खाताको मूल्य पनि घट्छ । कन्ट्राक्टको मूल्य घट्यो भने तपाइँलाई ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ पठाउँछ । मार्जिन कलपछि तपाइँले आफ्नो खातामा रकम थप्नुपर्छ । रकम थप्न नसकेमा तपाइँको स्थान रद्द हुन्छ । तपाइँले पहिले जम्मा गरेको रकम गुम्न पुग्छ । समग्रमा, कमोडिटी मार्केटमा लगानी गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ :
Previous Previous post: दाउदका सहयोगीले पाकिस्तानबाट चेतावनी दिदैँ भने -भारतले मुम्बई बम बिस्फोट नभुलोस्
Next Next post: के हो ग्रामिण स्वावलम्बन कोष ? कहाँकहाँ हुन्छ लगानी ?